မိန်းမယူရန် အသက် အပိုင်းအခြား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မိန်းမယူရန် အသက် အပိုင်းအခြား
မိန်းမယူရန် အသက် အပိုင်းအခြား
Posted by Mee Wah on Jun 23, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Facebook | 10 comments
ဒီအချိန်ကတော့ မနက် ၆ နာရီ အချိန်လောက်ပါ။ စောစောစီးစီးဈေးထဝယ်ထားတဲ့ လူတချို့ကြောင့် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးတွေ ပါသွားတာကလွဲလို့ ကျန်တာတွေအကုန်လုံး အကောင်းတွေပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ဈေးစဆစ်လို့ ရပါပြီ။
ဒီအချိန်မှာတော့ မနက်ပိုင်းကကျန်ထားတာတွေကို စတင်ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်နေရပါပြီ။ ဥပမာ အစည်းပြေနေတာတွေကို ပြန်စည်းမယ်၊ မကောင်းတဲ့ အပိုင်းတွေကို ဖယ်ထုတ်မယ့် ရှင်းလင်းပွဲကြီး စတဲ့အချိန်ပေါ့ခင်ဗျာ။ ဒီအချိန်ကတော့ ရောင်းသူ၊ဝယ်သူ နှစ်ဦးညှိနှိုင်းပြီး ရောင်းလို့ ဝယ်လို့ ရပြီပေါ့ဗျာ။ အချိန်အားဖြင့်တော့ နေ့လယ် ၁၁ နာရီခန့်ရှိပါပြီ။
ရောင်းတဲ့လူက တချက်လောက်မူလိုက်ရင်ပဲ ဝယ်သူက ချာကနဲလှည့်ထွက်လာပါပြီ။ နောက်မှ ဝယ်သူကို ဈေးလည်းလျှော့ပေးပါ့မယ် အပိုလည်းပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး ပြန်ခေါ်နေရတာလည်း ဒီအချိန်ပေါ့ဗျာ။
Translated By Phoe Thu Taw
ဘာလိုလိုနဲ့ ငါလည်း ၁၁ နာရီလောက် ရှိနေပြီပဲ
အဲ …အာ့ မိန်းကလေးတေ ရဲ့ အသက်ကိုရေးတာမလား ဟင်င်င်
ဘယ်အရွယ် မိန်းကလေးက ဘယ်ဈေးနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ
အာ့ ..ဟိုအပေါ်က ဆပ်စလူး နတ်ပူး ဆက်ဆက် က ဘယ့်နှယ့် သူ့အသက် လာကြေငြာသွားတာတုန်း…..
ဘာပြောရမှန်းမသိလို့ အဲ့ဒါပဲ ပြောထည့်လိုက်တာဟ
၁၁ နာရီလောက် ဆော်လေးတစ်ယောက် ရှာဖို့ ပြေးပြီ။
မနက်အစောဆုံးလေး ရလည်း ဆိုးပါဘူး။
ကျုပ်တုန်းကတော့..“မီးခွက်ဈေး” က၀ယ်ခဲ့တယ်..ဒါပေမဲ့ အလတ်ကြီးပါဗျာ
ဟယ် သုံးဆယ်ကျော်ရင်မီးခွက်ဈေးဆိုတော့ လေးဆယ်ကျော်ရင် သန်းခေါင်ယံဈေးလားဟင်။ အရဂါးပေးရမာလား။
လေးဆယ်ကျော်ရင် ကေတီဗွီ ဈေးလောက်တော့ ထားပါ မသဲရယ်။ သန်းခေါင်ယံဈေးတော့ မပို့နဲ့အုံးပေါ့။
လူပျို ဂျီး တွေ ဆင်ခြင်လို့ရအောင်ပါ….ရတာလိုပီး လိုတာရကြပါစေ….:P
မိန်းမကို ယူရမဲ့ ယောက်ကျားရဲ့ အသက်လားးးး
ယူရမဲ့ မိန်းမရဲ့ အသက်လားးး
မိန်းမ အယူခံရမဲ့ ယောက်ကျားရဲ့ အသက်လားး
အင်းးးး မိဖုရားလေးပါးကို တွက်ကြည့်ဦးမှ